သတိုး: March 2011
တကယ်တော့ ဒီနေရာလေးမှာ မတစ်ယောက် ရှိနေနှင့်ခဲ့လို့သာ ကျွန်မတို့တတွေ နေပျော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါသည်။ မဟုတ်လျှင်တော့ ဒီနေရာလေးဟာ အကျယ်ချုပ် အကျဉ်းကျနေတာနှင့် မခြား စိတ်လေခြောက်ခြားစရာ ကောင်းနေမည်လားမသိ။
စရောက်သည့်နေ့ကစလို့ ကျင့်ကြံလိုက်နာစရာစည်းမျဉ်းများ၊ ရှောင်ရှားရမည့် အမူအကျင့်များ၊ အပြုအမူများ၊ အချိန်ဇယားများ စသည်ဖြင့် ခေါင်းနောက်စိတ်လေချင်စရာချည်းပင်။ ဆယ်တန်းစာမေးပွဲကြီးကို ထူးထူးချွန်ချွန် အောင်ချင်စိတ်တစ်ခုကြောင့်သာ ဒီနေရာသို့ ရောက်လာခဲ့တာဖြစ်သည်။ တကယ်ဆို ကျွန်မ…မေမေနှင့်ခွဲချင်ခဲ့တာ မဟုတ်။ အတူနေစဉ်က သိပ်မတည့်လှသော ညီမလေးကိုလည်း ခုတော့ လွမ်းရကောင်းမှန်းသိနေပြီ။
``တိုတွေက အရင်ဘ၀တုန်းက ရေစက်ရှိခဲ့ကြလို့သာ တစ်နေရာစီကနေရောက်လာပြီး ဒီမှာ တစ်စုတစ်ဝေကြီးနေရဖို့ အကြောင်းဖန်လာတာပေါ့။ ဒါပေမယ့် ခုလိုနေခွင့်ရမှာက အကြာကြီးလည်း မဟုတ်ဘူး။ ဒီစာသင်နှစ် တစ်နှစ်တည်းပဲ။ ပျော်စရာတွေလည်း ရှိမယ်။ စိတ်ညစ်စိတ်ရှုပ်စရာတွေလည်း ရှိမှာပေါ့။ ဒါပေမယ့် တို့…ညီအစ်မတတွေ စုစုစည်းစည်း တိုင်တိုင်ပင်ပင်၊ ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ ရင်ဆိုင်ကြမယ်။
သူမ၏ အရပ်အမောင်းက ကျွန်မတို့တတွေထက် အနည်းငယ်မျှသာ မြင့်ပေလိမ့်မည်။ အသားဖြူဖြူ ပိန်သွယ်သွယ်ကလေးမို့ ကျောင်းသူမတွေနှင့် သိသာစွာ မခြားနားလှ။ ကျောလယ်ထိရှည်သော ဆံပင်ကို နောက်သို့စုသိမ်းကာ ကလစ်တစ်ခု၊ သို့မဟုတ် ခေါင်းစည်းကြိုးတစ်ချောင်းနှင့် ထာဝစဉ် စည်းနှောင်ထားတတ်သည်။ သူမ၏ မျက်ဝန်းကြည်ကြည်လေးတွေက နူးညံ့ခြင်း အရိပ်တစ်မျိုး ယှက်သန်းနေလျှက်။ ပန်းသွေးရောင်နှုတ်ခမ်းပါးများကတော့ နွေးထွေးစွာ ပြုံးနေခဲ့လေသည်။
ကျွန်မတို့အားလုံးက သူမကို မ..ဟု တစ်လုံးတည်းအဖျားဆွတ်ကာ ချစ်နိုးစွာခေါ်ခဲ့ကြပါသည်။ မကလည်း ကွန်မတို့အားလုံးကို လိုအပ်သောတစ်ခါတစ်ရံမှလွဲလျှင် နာမည်အရင်းအတိုင်း ခေါ်ခဲလှသည်ပင်။ ဘယ်သူ့ကိုမဆို ညီမလေးဟုသာ ကြင်နာနွေးထွေးစွာ နူးနူးညံ့ညံ့ခေါ်ပြောဆက်ဆံတတ်ခဲ့တာဖြစ်သည်။
``ဘာအကြောင်းပဲ ရှိရှိ မကို အသိပေးပါ။ တိုင်ပင်ပါ နော်။ မ..ညီမလေးတို့ကို ကိုယ့်ညီမလေးအရင်းတွေလို တစ်နှစ်လုံး စောင့်ရှောက်မှာ
မိန်းကလေးတချို့ နှာခေါင်းရှုံ့လိုက်ကြတာ သူမလည်းမြင်လိုက်ရပါလျှက် မသိသလို မျက်နှာလွှဲလိုက်လေသည်။ ကျွန်မလည်း ရောက်စကတော့ သူမကို သိပ်ပြီး ယုံကြည်လို့မရခဲ့ပေ။ သူမဟာ study guide တစ်ယောက်အဖြစ် ကျွန်မတို့နှင့် နေ့နေ့ညည တစ်နှစ်တာလုံးအနီးကပ်ရှိနေမည့်သူဖြစ်သည်။ ဘာသာရပ်တွေကို သင်ယူရာမှာ အခက်အခဲတွေ့လျှင် သူမက လမ်းညွှန်ပြသနိုင်ပေလိမ့်မည်။ အချိန်ဇယားအတိုင်း နေ့စဉ်ပုံမှန် စာစစ်ပေးဦးမည်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မတို့တတွေ ဆရာများ၏အလစ်မှာ တစုံတရာ စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်မိလျှင်၊ အပြစ်လုပ်မိလျှင်တော့ အုပ်ချုပ်သူဆရာမကြီးထံ အသိပေး တိုင်ကြားဦးမှာ မဟုတ်လား။
သို့ပေမယ့် ဒီနေရာသို့ရောက်ပြီး ရက်အနည်းငယ်အတွင်းမှာပင် ကျွန်မတို့အားလုံး အသားတကျနေပျော်သွားကြတော့ပြီ။ ရောက်စက ညအိပ်ယာဝင်လျှင် စောင်ခေါင်းမြီးခြုံကာ တိတ်တိတ်ကျိတ်ငိုတတ်ကြသူတွေတောင် ခုတော့ အိပ်ယာထဲမှာ ရေပက်မ၀င်တွတ်ထိုးရင်း တခစ်ခစ် လုပ်နေတတ်ပြန်တာမို့ မက ခဏခဏ သတိပေးရင်း ဟန့်တားခြောက်လှန့်နေရပြီ။ မကို ရောက်စကလောက် မရှိန်တော့သော်လည်း သူ့စကားတော့ နားထောင်မှဖြစ်မည်ဟု အားလုံးက စိတ်ဝမ်းလက်ညီ နားလည်လက်ခံမိနေပြီ။ ကိုယ့်ရဲ့ ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ သင်္ခန်းစာအခက်အခဲများ၊ တစ်ကိုယ်စာလိုအပ်ချက် အသေးအမွှားကလေးများမှသည် နာဖျားမကျန်းကိစ္စအထိ ချက်ချင်းရင်ဖွင့်ပြောပြနိုင်သောသူက မတစ်ယောက်တည်းသာ မဟုတ်လား။ ပြီး လိုအပ်သလို အလေးဂရုပြု ဖြည့်ဆည်းပြုစုတတ်သူကလည်း မပဲဖြစ်နေပြန်ပါသည်။ အုပ်ချုပ်သူဆရာမကြီးနှင့် ဘာသာရပ်သင်ဆရာများကို စကားတစ်ခွန်းတိုက်ရိုက်ပြောဖိုိ့ရန်ကျတော့ ကျွန်မတို့ကျောင်းသူမတွေက နှုတ်နှေးတွန့်ဆုတ်နေကြသေးတာဖြစ်သည်။ လိုအပ်လျှင် မက သူကိုယ်တိုင် သက်ဆိုင်ရာ ဆရာတို့ထံ အသိပေးလေ့ရှိပါသည်။ အခါများစွာကတော့ သူသာတာဝန်ခံကာ လူစေ့တက်စေ့ကို ထောင့်စေ့အောင် တာဝန်ယူပေးတတ်လေ့မြဲ။
မကိုတော့ ကျွန်မတို့တတွေက အချိန်တိုအတွင်းမှာပင် ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်နေမိကြတော့တာ။ လိုအပ်တာ၊ လိုချင်တာမှန်သမျှ သူမထံတွင်သာ ရင်ဖွင့်အရေးဆိုနေမိကြတော့တာ။ သူမကလည်း ကျွန်မတို့မိန်းကလေးတွေအားလုံးကို ချော့တစ်ခါ၊ ချောက်တစ်လှည့်ဖြင့် သူလိုရာရောက်အောင် အလျှော့အတင်းညီညီ ကိုင်တွယ်နိုင်သူဖြစ်လေသည်။
မက အင်္ဂလိပ်စာ အဓိကဖြင့် ကျောင်းပြီးခဲ့သူဟု သ်ိရပါသည်။ နောက်ဆုံးနှစ်မှာ ကွာလီဖိုင်းတောင် ၀င်ခဲ့သေးသည်တဲ့။
``မကလည်း မဟာဆက်တက်ပြီး တက္ကသိုလ်မှာ ဆရာမပြန်လုပ်ပါတော့လား။
ကိုယ်ဖြစ်စေချင်တာပဲ ဇွတ်တရွတ်ပြောနေမိသော ကျွန်မကို အရိပ်အကဲနားမလည်တတ်သူဟု ကျွန်မ၏ သူငယ်ချင်းမ ဆွေက စွတ်စွဲခဲ့လေသည်။
``ဟိုမှာ မျက်နှာပျက်သွားတာ နင်မတွေ့လိုက်ဘူးလား။ သူလည်း မတက်ချင်ပဲ နေမလား။ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ဒီကိုရောက်လာတာ ရှိမှာပေါ့
ကျွန်မသာဆိုလျှင်တော့ ကိုယ်လုပ်ချင်တဲ့အရာကိုသာ နောက်မဆုတ်တမ်း၊ မငဲ့မကွက် လုပ်မှာပင်။ မလွှဲကင်းသာစွာ လုပ်ရသောအလုပ်မျိုးတော့ စိတ်ကို မ၀င်စား။
``ဟဲ့… မိုး။ နင် တယ်ခက်ပါလား။ ဒါ မရှိရင် နင်လုပ်ချင်တာ ဘာမှ လုပ်လို့ မရဘူးဟဲ့
ဆွေက အရန်ကောဟူသည့် အမူအယာအပြည့်ဖြင့် ကျွန်မကို သူငယ်နှပ်စားလိုကြည့်ကာ လက်မနှင့် လက်ညှိုးကလေးကို ကွေးဝိုင်းပြလေသည်။
``မက ဆယ်တန်းတုန်းကလည်း ဂုဏ်ထူးသုံးခုပါခဲ့သေးတာတဲ့။ ဆရာဝန်ဖြစ်ဖို့လည်း စိတ်ကူးယဉ်ခဲ့သေးတယ် ထင်တယ်။ ဒါပေမယ့် သူကတော့ ဆရာဝန်မဖြစ်ချင်ပါဘူးတဲ့။ စာသင်ရတာပဲပျော်တယ်။ ဆရာမပဲဖြစ်ချင်တယ်တဲ့
တကယ်တမ်းမှာ မတစ်ယောက် ဆရာဝန်ဖြစ်ချင်ခဲ့လျှင်တောင် သူမမှာ မိဘကျောထောက်နောက်ခံ တောင့်တင်းပုံမရပါ။ မတို့အဖေက အစိုးရဌာနတစ်ခုမှ အရာရှိဟောင်းကြီးတစ်ဦးဖြစ်ပြီး လွန်ခဲ့သော နှစ်နှစ်ခန့်ကပင် ကျန်းမာရေးကြောင့်ပင်စင်ယူလိုက်ရသည်ဟု ပြောကြသည်။ အမေကတော့ ကုန်စုံဆိုင်ကလေး ဖွင့်ထားသည်တဲ့။ မောင်လေးက ပထမနှစ် အဝေးသင်တက္ကသိုလ်တက်နေကာ ညီမလေးကတော့ ဒီနှစ် ဆယ်တန်းဖြေရမည်ဟု ဆိုပါသည်။
``မရဲ့ညီမလေးကို ဘာလို့ ဒီမှာ မထားတာလဲ
``မတို့အိမ်ကနေ ဒီကို ကျောင်းလာတက်ဖို့က ဝေးလွန်းတယ်။ မောင်လေးကလည်း အလုပ်တစ်ဘက်နဲ့ဆိုတော့ အကြို၊ အပို့လုပ်မပေးနိုင်ဘူးလေ။ အိမ်နဲ့နီးတဲ့ ကျူရှင်တစ်ခုမှာ အချိန်ပိုင်းတက်နေတယ်
``ဟင်…ညလေးတို့လို ကျောင်းအိပ်ကျောင်းစား နေလိုက်ပေါ့
ဆွေက ကျွန်မကို တံတောင်နှင့်တွတ်ပြန်လေသည်။
``ညီမလေးတို့က အရမ်းကံကောင်းကြတာ။ မိဘတွေက တတ်လည်း တတ်နိုင်ကြတယ်။ သားသမီးတွေကိုလည်း ထူးချွန်စေချင်လို့သာ ဒီကို လာပို့ပေးထားကြတာ။ သူတို့ တာဝန်ကျေတယ်။ ညီမလေးတို့လည်း ကိုယ့်ဘက်က တာဝန်ကျေဖို့ ကြိုးစားကြ ဟုတ်လား။
ဘယ်စကားပဲပြောပြော နောက်ဆုံးတော့ ဒီစကားပဲ။ စာကြိုးစားဖို့သာ ဆိုနေပြန်တာကြောင့် ကျွန်မတို့တတွေ စကားမဆက်ရဲကြတော့။
ကျွန်မတို့တတွေ ဈေးထွက်ချင်ပြီဆိုလျှင် မကိုပဲ အပူကပ်ရကောင်းမှန်း သိနေကြပြီ။ ကျွန်မတို့အား ဈေးထွက်ခွင့်၊ အပြင်ထွက်လည်ပတ်ခွင့် လုံးဝခွင့်မပြုပါ။ နံနက်စာ မုန့်စားထွက်ရန် ခဏမျှကိုပင် နီးနီးနားနားမှာပဲ စားစေသည်။ ပြီး မပါမှသာ အပြင်ထွက်လို့ရတာ ဖြစ်ပါသည်။
မက အပြင်ထွက်ရန် ၀ါသနာပါပုံမရ။ တစ်ခါလောက် နားပူနားဆာပြုမိလျှင် အင်းအဲနှင့် နေ့ရွှေ့ညရွှေ့လုပ်နေလေ့ရှိပါသည်။ မအိုက်တင်ခံနေသည်ဟု တချို့က ထင်ကြသည်။
``လိုက်ပို့ပါ မရယ်။ မုန့်ကျွေးမယ်လေ…
ဒါပေမယ့် မက ကျွန်မတို့ကျွေးသောမုန့်ကိုတောင် လွယ်လွယ်နှင့် မစားပါ။ သူမမှ ကျွန်မတို့ကျွေးသောမုန့်ကိုမစားလျှင် စိတ်ဆိုးမှာလို၊ ခုပဲ ငိုချလိုက်တော့မှာလို၊ ညပိုင်းစစ်မည့် ကျက်စာတွေကို မကျက်ပဲ ဆန္ဒပြကြတော့မှာလို…နည်းမျိုးစုံအောင် ၀ိုင်းပြောပြီး ကျွေးကြရလေသည်။
ကျွန်မတို့ထံမှ ကတိအမျိုးမျိုးတောင်းကာ ဈေးသို့ရောက်လျှင်တော့ သူမ..ကျွန်မတို့အားလုံးကို စိတ်ရှည်လက်ရှည်အလိုလိုက်လေ့ရှိပါသည်။ တရားလွန်လာလေမှ နာရီလေး မြှောက့်တကြည့်ကြည့်ပြုကာ…
``ဟေး..ကျုပ်တို့ထွက်လာကြတာ ကြာပြီ။ လက်စသတ်ပြီး ပြန်ကြရအောင်
ကျွန်မတို့ကလည်း စကားတစ်ခွန်းတည်းဖြင့် ပြီးပြတ်သောသူများ မဟုတ်ပေ။ ဟိုဆိုင်ဝင်ဦးမယ်။ ဒီဟာဝယ်ဦးမယ်ဆိုကာ အချိန်ဆွဲတတ်ကြသူများဖြစ်သည်။
``မ..ဒီအင်္ကျီလေး မနဲ့လိုက်တယ်။ ယူပါလား
``ယူလိုက်ပါ။ မီးတို့က မကို လက်ဆောင်ပေးချင်လို့
``အပိုတွေ မလုပ်ကြနဲ့။ လာ..ပြန်ကြမယ်
မ မျက်နှာထားညိုလျှင်တော့ ကျွန်မတို့အားလုံးက လန့်ကြပါသည်။
``ရှင်တို့က မိဘပိုက်ဆံနဲ့ ကျုပ်ကို မျက်နှာလုပ်ချင်ကြတယ်ပေါ့လေ….
အပြန်လမ်းတစ်လျှောက်လုံးမှာ ၀ယ်ချင်တာ၊လိုချင်တာမှန်သမျှ လိုတရနေသော ကျွန်မတို့တတွေ ကံကောင်းကြကြောင်း၊ မိဘတွေကို ကျေးဇူးတင်သင့်ကြောင်း၊ ကျေးဇူးတုံ့ပြန်နိုင်ရန်စာကိုသာ ကြိုးစားသင်ယူသင့်ကြောင်းဖြင့် အပ်ကြောင်းထပ်စကားတွေကို နားအူမတတ် သောတဆင်ကြရတော့ပြီ။
ထိုကိစ္စကို ကြားလျှင်ကြားချင်း ကျွန်မတို့တတွေ မယုံကြည်နိုင်ခဲ့ပေ။ မကတော့ မျက်နှာကလေး ညို့ရီရီနှင့် သူမ၏ တာဝန်ဝတ္တရားတွေကို တစ်ချက်ကလေးမှ မလစ်ဟင်း၊ မပျက်ကွက်စေခဲ့ရပါ။ ကျွန်မတို့၏ စာသင်ချိန်တိုင်း စာသင်ခန်းထဲအထိလိုက်ပါပို့ပေးနေမြဲ။ အချိန်ဇယားအတိုင်း စာစစ်ပေးနေလေ့မြဲ။ မရှင်းလင်း၊ မကျေညက်သော သင်ခန်းစာများကိုလည်း စိတ်ရှည်လက်ရှည် ရှင်းလင်းသင်ပြပေးလေ့မြဲ။
``ကျုပ်စိတ်တိုတယ်။ ရှက်စရာသိပ်ကောင်းတာပဲ။ ရှင်တို့ကိုသာမငဲ့ရရင် ခုချက်ချင်း အလုပ်ထွက်ပစ်တယ်
မ ဒီကထွက်သွားမှာကိုတော့ ကျွန်မတို့အားလုံးက လုံးဝ လက်မခံနိုင်ကြပါ။ ကျွန်မတို့အတွက် အရာအားလုံးဟာ မနဲ့သာ အသားကျအဆင်ပြေလှတာ။ မကလွဲလို့ အခြားတစ်ယောက်ကို ကျွန်မတို့ အလိုမရှိကြပေ။
မျက်နှာကလေးငယ်နေရှာသော ဧကရီကိုငေးကာ ခပ်ဖွဖွပြုံးနေပြန်ရင်း…
``ကျုပ်စိတ်တိုနေတာ ရှင်တို့ကိုမဟုတ်ဘူး။ အလကားနေရင်း အမနာပ သတင်းပြန့်ရတဲ့ အဖြစ်ကို။ ပြီး.. ဆရာမကြီးကလည်း မေးမေးမြန်းမြန်းမရှိဘူး။ ကျုပ်ကိုခေါ်တော့ အပြင်က သတင်းကို သူက အပြီးယုံထားပြီးသားဖြစ်နေပြီ။ ဆီးကြိုပြီး အပြစ်တင်တော့တာ
ငိုမဲ့မဲ့ဖြစ်လာသော ဧကရီကအား ချော့ရပြန်သေးသည်။
ဧကရီက ကျွန်မတို့အားလုံးထဲမှာ အချမ်းသာဆုံး၊ မြို့မျက်နှာဖုံး၏မြေး၊ အောင်မြင်တွင်ကျယ်သော လုပ်ငန်းရှင်ကြီး၏ တစ်ဦးတည်းသော ရှုမငြီးမလေးဖြစ်လေသည်။ ချစ်စဖွယ်အပြုံးချိုကလေးနှင့် စာလည်းတော်ပါသည်။ ဥာဏ်ကောင်းသော ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေ ထုံးစံအတိုင်း အပျင်းထူချင်သည်။ အပေါင်းအသင်းလည်း မင်သူဖြစ်ပြန်လေသည်။ ဧကရီ့ကိုဆိုလျှင် ဆရာဆရာမတွေရော၊ ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကပါ နှစ်လိုခင်မင်ကြသည်ချည်းပင်။
ဧကရီသည် မအား ကပ်မခွာတမ်း ချစ်ခင်တွယ်တာသူဖြစ်သေးသည်။ မကတော့ မိန်းကလေး အများကြားမှာ သူ့ကိုပိုတယ်၊ ငါ့ကိုကျပစ်ထားတယ်…စသော ကဂျီဂဂျောင်စကားတွေနှင့် စိတ်ဝမ်းမကွဲရလေအောင် ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်း၊ မျှမျှတတ ဖေးမဆက်ဆံလေ့မြဲ။ ဒါပေမယ့် ဧကရီက…
`` ဖေဖေ ရန်ကုန်ကအပြန် ဂျေဒိုးနပ်က ၀ယ်လာတာလေ။ မေမေက မဖို့ဆိုပြီး တစ်ဘူး သပ်သပ်ထည့်ပေးလိုက်တယ်။ မ မစားရင် ဧကရီက ဒီအတိုင်း အိမ်ပြန်ပေးလိုက်မှာ
အိမ်က လူကြီးတွေ၏ နာမည်သုံးကာ အကျပ်ကိုင်လာလျှင်တော့ မမှာ ငြင်းပယ်ဖို့ရန် ခက်ခဲရတော့သည်။
``ဧကရီကလေ…ဒီအဆင်လေးကို မနဲ့ ဆင်တူဝတ်ချင်နေတာ ကြာလှပြီ။ မေမေ့ကိုပြောတော့…
``ဧကရီ မကိုချစ်ရင် အဲလိုတန်ဖိုးကြီးတွေ ၀ယ်မလာပေးပါနဲ့။ မ…မယူချင်ဘူး။
``အင်းပါ။ နောက် ၀ယ်ပေးတော့ဘူး။ ခုတစ်ခါတော့ မေမေက ၀ယ်ပေးလိုက်ပြီးနေပြီလေ။ ယူထားလိုက်တော့နော်…နော်။ မမှာရှိတဲ နက်ပြာပြောင်လုံချည်လေးနဲ့ဆို အရမ်းလိုက်မှာ။
ဧကရီမှာ ရည်ရွယ်ရင်း မည်မည်ရရရှိပုံ မပေါ်ပါ။ ဒါပေမယ့် သူမက မအား တွယ်တာလွန်းသည်။ သူငယ်ချင်းတွေအားလုံးကြားမှာ သူ့ကို အနည်းငယ်လောက်ကလေးမျှပိုသာ၍ အရေးပေးစေချင်သည်။ မျက်နှာသာရချင်သည်။ သူမက သူမ၏ မိသားစုမှာလည်း အထွဋ်တင်အရေးပေး မြှောက်စားခံ နေလာခဲ့သူမဟုတ်လား။
``ဧကရီနော်။ နောက်တစ်ခါဆိုရင် မစိတ်ဆိုးတော့မှာ…
နှုတ်ကသာပြောနေသော်လည်း မစိတ်ဆိုးမှာ မဟုတ်တာ ဧကရီသိပါသည်။ မသည် သူမ၏ကျောင်းသူမများအား လိုအပ်လျှင် မျက်နှာအနည်းငယ်တည်တင်း မာကျောထားရုံသာရှိကာ စိတ်ဆိုးခြင်းမရှိပါ။
ကျွန်မတို့တတွေက မုန့်ဖိုးကလေးများ ဆုတ်ဆုတ်ခဲခဲရလာလျှင် တစ်ခုခု ၀ယ်ချင်၊ ချမ်းချင်ခဲ့ကြသည်။ ဒါပေမယ့် အပြင်ထွက်ကာ လည်ပတ်ဝယ်ချမ်းခွင့်က အလွန်အင်မတန် ရှားပါးလွန်လှရာ…
``မပဲ သိမ်းထားပေးပါနော်။ ညလေးတို့တွေ ဈေးထွက်ဖြစ်မှ ပြန်ယူမယ်
မက စာရင်းစာအုပ်ကလေးတစ်ခုကို အများမြင်သာအောင်ပင်ပြုလုပ်ကာ ငွေသိမ်းပေးထားတတ်ပါသည်။ စိတ်လိုလက်ရရှိချိန်တွေမှာ ငွေစာရင်းကို အသံလွင်လွင်ကလေးနှင့် ဖတ်ပြသေးတာ ဖြစ်သည်။ ခုတော့…
``study guide က ကျောင်းသူဆီမှာ ပိုက်ဆံချေးပြီး ပြန်မပေးဘူးတဲ့
ဒီသတင်းက ကျွန်မတို့ဝန်းကျင်မှာ တိတ်တိတ်ကျိပ်ကျိပ်ပျံ့လွှမ်းလာခဲ့ပြီ။ ယောက်ျားလေးစာသင်ဆောင်ဘက်တောင် ရောက်နေပြီမို့ အုပ်ချုပ်သူဆရာမကြီးက မအားခေါ်ယူကာ ပြင်းထန်စွာ သတိပေးလေပြီ။
``မ နော်…ဧကရီ အဲလိုမပြောဘူး
ထိုစကားအဓိပ္ပါယ်သို့ရောက်အောင် ဧကရီပြောခဲ့မှာ မဟုတ်တာ သေချာသလောက်ပါပင်။ ဒါပေမယ့် သူ့အိမ်က …..
ဧကရီက ဘာသဘောရယ်မဟုတ်ပဲ အလွယ်ပြောခဲ့လိုက်တာပင်။
မကလည်း ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် အမှန်တကယ် ယူသုံးးဖြစ်သွားခဲ့ပါသည်။ ထိုနေ့က လကုန်ခါနီးပြီမို့ မထံမှာ ငွေကြေးလက်ကျန်ခါလီကျနေချိန်ဖြစ်ပါသည်။
``ကျူရှင်လခက နှစ်လစာတောင် ကြွေးကျန်သေးတယ်တဲ့လေ။ ဒီတစ်လထပ်ပေါင်းရင်သုံးလတောင်ရှိပြီဆိုတော့ ကျူရှင်ဆက်မတက်ချင်တော့ဘူးလုပ်နေတယ်
``မကလည်း လဖြင့် မကုန်သေးပဲနဲ့
``လမကုန်ခင် ကြိုတင်ဝမ်နင်ပေးထားတာပေါ့ဟယ်။ ခုက အဖေရောဂါပြန်ထလာလို့လာပြောတာ။ ညနေ အိမ်ကို ခဏပြန်လိုက်ဦးမယ်။ ခက်တာက အဖေ့ကို ဆေးထိုးပေးဖို့ ငွေမရှိလို့လာပြောတာ။ မလက်ထဲမှာလည်း ငွေမကျန်တော့ဘူး
အဲဒီစဉ်ကတည်းက ဧကရီက အလွယ်တကူပြောသော်လည်း မကတွေတွေဝေေ၀နှင့် ဆုတ်ဆိုင်ဆိုင်းလုပ်နေသေးတာမို့…
``ဟုတ်တယ်မ ။ ယူသာသုံးလိုက်ပါ။ ထပ်လိုရင် ညလေးတို့ အားလုံးအပ်ထားထဲက ထပ်ယူသုံးလို့ရတယ်
ကြံရာမရသော အခြေအနေမို့ မလွှဲကင်းသာစွာ ဧကရီ့ ငွေကို မ..ယူသုံးလိုက်ရတာ ကျွန်မတို့အားလုံး သိနားလည်ပါသည်။
``ဟင်…ပြန်မပေးနဲ့ဦးလေ။ ဧကရီဖြင့် ဘာမှ သုံးစရာမရှိပဲနဲ့။
တကယ်တမ်းမှာ မတစ်ယောက် တစ်လလုံး အသုံးအစွဲ ကျပ်တည်းနေတော့မှာကို ကျွန်မတို့ရော…မကိုယ်တိုင်ပါ ကြိုတင်သိနေနှင့်ကြသည်ပင်။
``နော်..။ ယူသုံးထားပါမရယ်။ နောက်လကုန်ကျမှ ညလေးတို့ အပြင်ထွက်ခွင့်ရရင် ပြန်ယူမယ်လေ။
ဒီလ လပတ်စာမေးပွဲမှာ ဧကရီတစ်ယောက် အဆင့်အနည်းငယ်ကျသွားခဲ့တာက ပြဿနာ စတင်လေသည်။ စာမေးပွဲမှာ အဆင့်ကျခဲ့သောအပြစ်နှင့်ဆက်နွယ်ကာ မုန့်ဖိုး အသုံးစွဲကြမ်းသည်ဆိုသော နောက်ဆက်တွဲ ပြစ်မှုတစ်ခု ထပ်တိုးလာတော့သည်။
``ဧကရီ ညည်းကို မယုံဘူးနော်။ ငါ..ပြန်မေးဦးမယ်
``မေးကြည့်လိုက်။ ခုလောလောဆယ် မ အသုံးလိုလို့ ခဏယူသုံးထားတယ်
ဗူးတစ်ရာမဟုတ်ကြသော ပါးစပ်တစ်ပေါက်တို့သည် တစ်ယောက်ထံမှ တစ်ယောက်နားသို့ ဆင့်ကဲကူးပြောင်းလေလျှင် မူလဖြစ်ရပ်နှင့် လွဲချော်တိမ်းစောင်းလုပြီ။
``ကျွန်မကလေးတွေကို မေးကြည့်လို့ရပါတယ်။ အဲလိုမျိုး လုံးဝမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် နောက်တစ်ခါမဖြစ်ရအောင် ကျွန်မ အတတ်နိုင်ဆုံး ဆင်ခြင်ပါ့မယ်ရှင့်
မျက်နှာရဲရဲ၊ အသားတွေ တဆတ်ဆတ်တုန်ကာ လေသံကတော့ ထန်တင်းနေဆဲ။ သူမငိုမည်ထင်ထားသော်လည်း မျက်ရည်တစ်စက်တောင်မကျခဲ့တာ အံ့သြလျှက် မမေ့နိုင်ခဲ့။
မ၏ စကားအတိုင်းဆိုလျှင်တော့ ကျွန်မတို့တတွေဟာ အမှတ်စက်တစ်ခုမှာ ဆုံစည်းမိခဲ့ကြသော မျဉ်းဖြောင့်လေးတွေပေါ့ ။ ဒါပေမယ့် ဆုံမှတ်ကနေ ပြန်လည်ခွဲဖြာထွက်လာခြဲ့ကသည့်တိုင် ဘယ်တော့မှ ပြန်လည်မကြုံဆုံနိုင်တော့မည့် မျဉ်းဖြောင့်များတော့ မဟုတ်ပါ။
မဆိုညည်းနေကျ ဒီသီချင်းလေးကိုတောင် ကျွန်မတို့တတွေရဲ့ နှုတ်ဖျားမှာပါ စွဲစွဲမြဲမြဲ ဆိုညည်းတတ်နေခဲ့ကြပြီ။ ရှေ့လျှောက်ပြီးတော့လည်း ဒီသီသီချင်းလေး၏ အရသာကို ငြိတွယ်မှန်းမသ်ိ ငြိတွယ်မိရဦးတော့မည် ထင်ပါရဲ့။
တဆိတ်ရှိမျက်ရည်ရွဲ၊ ပုလဲခတတ်ကြသော ကျွန်မတို့အား ချော့မော့ဖေးမကာ အငိုတိတ်စေခဲ့တိုင်းမှာ…
``မကလေ ဘယ်တော့မှ မငိုဘူးကွ။ ညီမလေးတို့လည်း မငိုရပါဘူး
ဒါပေမယ့် အခွင့်သင့်လို့ ကျွန်မတို့တတွေ ပြန်ဆုံခွင့်ရခဲ့လျှင် ကျွန်မတို့၏ စာမေးပွဲအပြီး နောက်ဆုံးနေ့အိမ်အပြန်မှာ ကျွန်မတို့နှင့်အတူ ငိုကျွေးခဲ့သော မ၏မျက်ရည်တွေအကြောင်းကို ပြန်ပြောလျှက် ကြည်နူးခွင့်လေးရချင်မိသေးသည်။ ။
Posted by သတိုး at 9:48 PM3comments:
ဒီနေ့ ဖိုးတီတာတို့အိမ်သို့ ဧည့်သည်များ ရောက်လာကြပါသည်။ ဦးဦးနှစ်ယောက်နှင့် အန်တီလှလှ သုံးယောက်ဖြစ်သည်။ ဖေဖေနှင့်မေမေတို့ ပြောစကားများအရ ရန်ကုန်မှ ရောက်လာကြသော ဧည့်သည်များဟု သိရပါသည်။ ဦးမောင်နှင့် အန်တီမော်တို့ လင်မယားနှစ်ယောက်စလုံးက ဒီမြို့မှာ နေခဲ့ဖူးကြသော ဒီမြို့ဇာတိသားများ ဖြစ်ကြသည်။ ဖေဖေနှင့်ရော မေမေနှင့်ပါ အထက်တန်းကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူဘ၀မှာကတည်းက သွားလာမခွဲ တတွဲတွဲရှိခဲ့ဖူးကြသည့် ရင်းနှီးချစ်ကြည်ရဆုံး ငယ်သူငယ်ချင်းဟောင်းတွေလည်း ဖြစ်ကြသေးသည်။ နောက် ဦးမောင်၏ညီမ အန်တီမြိုင်…။ သူကတော့ ဆယ်တန်းမအောင်ခင် ကတည်းက ရန်ကုန်မှ ဆွေမျိုးတွေထံမှာ သွားရောက်နေနှင့်ခဲ့သူမို့ အနည်းငယ် စိမ်းသက်နေသည်။ အန်တီမြိုင်၏ ခင်ပွန်းနှင့် အန်တီမြိုင့်သူငယ်ချင်းမ အန်တီတို့ကတော့ ဖိုးတီတာတို့မြို့သို့ တစ်ခေါက်မှ မရောက်ဖူးကြသောကြောင့် အလည်သက်သက် လိုက်ပါလာခဲ့ကြသော ရန်ကုန်သူ၊ ရန်ကုန်သားစစ်စစ်များပေ။
ပုံမှန်ဆိုလျှင်တော့ မေမေက ဧည့်ကြောက်တတ်သူတစ်ယောက် ဖြစ်ပါသည်။ အထူးသဖြင့် လကုန်ခါနီးရက်တွေမှာ ဧည့်သည်ရောက်လာလျှင် မေမေသည် အားတင်းပြုံးနေလျှက်ကပင် သက်ပြင်းတွေ ခိုးရှိုက်နေတတ်ပြန်သည်။ ပြီး ဟိုဒီပြေးလွှား ချေငှားရင်း တစ်ယောက်တည်း ဗျာများနေတတ်တော့သည်။
ဒီဧည့်သည်တွေကတော့ ဖိုးတီတာတို့အိမ်မှာ ညအိပ်တည်းခိုမနေကြပါ။ သူတို့၏ ဆွေမျိုးရင်းချာတွေလည်း ဒီမြို့လေးမှာ ကျန်ရှိနေဆဲမို့ ဆွေမျိုးတစ်ယောက်၏ အိမ်မှာပဲတည်းကာ ဖိုးတီတာတို့ထံ ခဏငယ်ဝင်ထွက် နှုတ်ဆက်ကြတာဖြစ်သည်။ အချိန်ရသလောက်ကလေးမှာ ဖေဖေ၊ မေမေတို့နှင့် ရှေးဟောင်းနှောင်းဖြစ်ကလေးတွေ စားမြုံ့ပြန်ရင်း ငယ်သွေးကြွနေကြပါ၏။ မေမေက ဖေဖေ့ကို…
``တစ်ခါတစ်လေ လာကြတာ။ ထမင်းတစ်နပ်လောက်တော့ လက်ဆုံးစားကြရအောင်လေ´´
“ကောင်းသားပဲ ဝေရဲ့။ ကိုယ်… ဘယ်ဆိုင်မှာ စီစဉ်လိုက်ရမလဲ”
ဖေဖေ့စကား မမှားပါပဲ မေမေက ဘာကြောင့်မှန်းမသိ၊ မျက်စောင်း အကြီးကြီး ပိတ်ထိုးကာ…
“ကျွန်မ သူငယ်ချင်းကို ကျွန်မကိုယ်တိုင် စပယ်ရှယ် ချက်ကျွေးမှာ…”
ငွေကုန်ကြေးကျ ပိုမှာ မေမေ.. စိုးရိမ်နေမှန်း ဖေဖေက အစင်းသိနေသူမို့ လှောင်ပြုံးထေ့ထေ့ ပြုနေသည်။
``ဟယ်…ဒုက္ခမရှာပါနဲ့ သူငယ်ချင်းရယ်။ တို့လည်း အဲလောက် အချိန်ရကြတာ မဟုတ်ဘူး ဝေရဲ့။ မဖြစ်မနေ အရေးကြီးကိစ္စ ရှိလို့သာ ရောက်လာကြတာ။´´
``အဲဒါကြောင့် ကျွေးချင်တာပေါ့ မော်ရဲ့။ ရှင်တို့က တစ်နှစ်နေလို့ တစ်ခေါက်တောင် မြို့ကို ပြန်လာနိုင်ကြတာ မဟုတ်ဘူးလေ။ ရောက်တုန်းရောက်ခိုက်လေးမှာ ကိုယ့်သူငယ်ချင်းတွေကို ဒီလောက်ကလေးမှ ဧည့်ဝတ်မကျေရဘူးလား…ကဲ´´
ဖေဖေနှင့် ဦးမောင်တို့ကတော့ ဇနီးသည်တွေ၏ စကားဝိုင်းကို ကိုယ်စီပြုံးလျှက်သာ စောင့်ငေးနေလိုက်ကြပါသည်။
``မိမော်နော်။ ငါ့လက်ရာကို မစားပဲ ပြန်သွားလို့ကတော့ နင့်ကို တစ်သက်အပြတ်ပဲ´´
``ဟောတော်… ကိုမောင်ရေ…။ အဲဒါမှ ရှင့်သူငယ်ချင်း မိဝေအစစ်ပဲ´´
``ဝေေ၀တို့ကတော့ ငယ်ကျင့်တွေ ခုထိ မပျောက်သေးဘူးဟေ့´´
…. ဆိုကာ ရယ်ရယ်မောမော သဘောတူလိုက်ကြပါသည်။
ဖိုးတီတာတို့ မောင်နှမကတော့ ဧည့်သည်မျှော်တတ်သူတွေ ဖြစ်လေသည်။ အိမ်မှာ နေ့ရက်အတန်ကြာ ဧည့်သည်အရောက်အပေါက် ကျဲပါးသွားပြီဆိုလျှင်…
…ဆိုကာ ဧည့်မျှော်တတ်ကြလေသည်။ ဖိုးတီတာတို့အိမ်မှာ ဧည့်သည်ရှိမှ မေမေက ဟင်းကောင်းချက်တတ်တာ မဟုတ်လား။ ပုံမှန်နေ့များဆိုလျှင် အသားလေးပျက်သိကာမျှနှင့် အသီးအရွက်တစ်မျိုးမျိုးရောကာ အရည်များစေ၊ ဆားငန်စေဆိုရမည့် ဟင်းမျိုးတွေနှင့်သာ လွေးရလေ့ရှိတာဖြစ်သည်။
``ဖိုးတီတာ ဟင်းခွက်ကို သိပ်မွှေမနေနဲ့ဟဲ့။ ငါးတွေ ကျေကုန်မယ်´´
``မမပြောတဲ့ အဲဒီငါးကိုပဲ အကောင်လိုက်မြင်ဖူးချင်လို့ ရှာနေတာပါဗျ။ ´´
မေမေ့ဟင်းမှာ ငါးဟင်းခတ် နည်းပါးလွန်းပြီး အရိုးအရွက်ရောနှောကာ အရည်ဗုံးဗောဖြစ်နေတာကို ဖိုးတီတာတို့မောင်နှမက အတိုင်အဖောက်ညီစွာ ဟာသဖွဲ့နေကြပါသည်။ ဖေဖေက ပြုံးစစ..။ မေမေကတော့ ဖိုးတီတာတို့အား မျက်စောင်းခဲလေပြီ။
``အဲလောက်နဲ့ ဟင်းဖြစ်အောင် ကျွန်တော်မျိုးမ ဘယ်လောက် ဦးနှောက်ခြောက်ခံ စီမံဖန်တီးရတယ်ဆိုတာ ရှင်တို့သိကြရဲ့လား။ တစ်နေ့ တစ်နေ့ ဈေးကို အခေါက်ခေါက်အခါခါ ခြေတိုအောင်ပတ်ပြီး ပါတဲ့ပိုက်ဆံနဲ့ ချင့်ချိန်တွက်ချက်နေရတာ ခေါင်းမွေးတောင် အတော်ဖြူနေပြီ ဟွန်း´´
``ဝေကလည်းကွာ။ ကလေးတွေကို ဘာတွေလျှောက်ပြောနေတာလဲ။´´
``ကလေးတွေကို ပြောတာထက် ရှင့်ကိုပိုသိစေချင်တာ။ ဟင်းမကောင်းရင် ရှင်လည်း မျက်နှာညိုချင်တာပဲ မဟုတ်လား။´´
``အော…ပြောလို့ရောရမလား။ ရှင်အပ်တဲ့ တစ်လ၊ တစ်လ၀င်ငွေကိုလည်း ရှင်ပြန်တွက်ကြည့်ဦးလေ။ ဒါတောင် ကျွန်မ အိမ်က ရေခဲထုတ်ကလေး တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် ထုတ်နေရသေးလို့…´´
``ဟာ…နောက်ဆုံးကျတော့ မင်းက ဒီဘူတာဆိုက်တာပဲ´´
ဖေဖေက စားလက်စကို အလျှင်စလို လက်စသတ်ကာ ထမင်းဝိုင်းမှ ထထွက်သွားတော့သည်။ မေမေက တစ်ကိုယ်တည်း တီးတိုးဗြစ်တောက်နေပြန်တာမို့ ဖိုးတီတာတို့မောင်နှမတွေ ငြိမ်ကုတ်ကာ ထမင်းကိုသာ ဟင်းရည်ရွှဲရွဲဆမ်းကာ ငုံ့လွေးနေမိကြတော့သည်။
ဖေဖေနှင့် မေမေက ဧည့်သည်များအား တနင်္ဂနွေနေ့မှာ ထမင်းစားဖိတ်လိုက်ကြပါသည်။ ထိုနေ့က ဖေဖေ့ ရုံးပိတ်ရက်ဖြစ်သလို ဖိုးတီတာတို့မောင်နှမ၏ ကျောင်းပိတ်ရက်လည်း ဖြစ်သောကြောင့်ပင်။
``ညနေပိုင်းမှ အားမယ်ထင်တယ်ဝေရဲ့။ ညစာပဲ ကျွေးပါနော် ´´
``ပြီးရော…။ ရောက်မလာရင် ပြန်လျော်ရမှာနော်။ ကျုပ်က ရှင်တို့တည်းတဲ့အိမ်အထိ လိုက်ရန်တွေ့မှာ´´
``ရှင့်တကယ်လုပ်မှာ ယုံပါတယ် မိဝေရယ်။ ကျုပ်တို့ကလည်း ရောက်အောင်ကို လာဦးမှာ စိတ်ချ။´´
တနင်္ဂနွေနေ့ တစ်နေ့လုံး မေမေတစ်ယောက် ချွေးတလုံးလုံးဖြင့် တစ်နေကုန် ကြော်လှော်ချက်ပြုတ်ရင်း မောရပမ်းရမှန်းပင် မသိတော့ပေ။
``ဧည့်သည်ကျွေးပြီးရင် စားရမှာပေါ့ ဖိုးတီတာရယ်´´
ဖိုးတီတာ မျက်နှာညိုလေလျှင် သူ့မမက လက်တို့ခေါ်ကာချော့လေသည်။
``မေမေ မောနေပြီလေ မောင်လေးရဲ့။ ခါတိုင်းလည်း ဧည့်သည်တွေကို ထမင်းဖိတ်ကျွေးနေကျပဲကို။ ဘယ်ဧည့်သည်က အကုန်ပြောင်အောင် စားပစ်ကြတာမို့လဲ။ သူတုိ့ကျန်ရင် တို့မောင်နှမတွေပဲ လက်ကျန်ရှင်းနေကျ မဟုတ်လား။ ဧည့်သည်တွေကိုကျွေးပြီးရင် စားရမှာပေါ့ မောင်လေးရဲ့´´
``ဖိုးတီတာက ခု… နည်းနည်းလောက် မြည်းကြည့်ချင်တာ။ နည်းနည်းလောက်လေးပဲ´´
ဖိုးတီတာသည် အစားမက်သလောက် အကောင်းကြိုက်တတ်သူလေးလည်း ဖြစ်သေးသည်။ သူ့မမက ချော့ချော့မော့မော့ကလေး ပြုံးပြကာ…
``ခဏနေရင် ဧည့်သည်တွေ ရောက်လာကြတော့မှာ။ သူတို့စားပြီးတာနဲ့ မောင်လေးကို ကျွေးမှာ။ အဲဒီအချိန်ကျရင် မမအတွက် ဝေစုထဲကပါ မောင်လေးကို မျှကျွေးဦးမယ်..ဟုတ်လား။
ဖိုးတီတာ မကျေနပ်သော်လည်း ဦးခေါင်းကိုတော့ ညိတ်ပြရလေသည်။
ချက်ပြုတ်ပြီးစီးလို့ မေမေတစ်ယောက် ဟင်းပွဲတွေနေရာချရာတွင် မမလည်း ၀ိုင်းကူပေးနေပါသည်။ အစားတစ်မျိုးသာ အာရုံကျနေသော ဖိုးတီတာကတော့ မြိုင်ဆိုင်ဖွယ်ရာလှသော ဟင်းပွဲများကို မြင်ရလေ သွားရည်ယိုကာ ဗိုက်ထဲက တကျုပ်ကျုပ် မြည်လာလေပင်။ ဧည့်သည်တွေရေ…မြန်မြန်လေး လာကြပါတော့ဗျာ။
ဒါပေမယ့် ည…ခုနှစ်နာရီထိုးသည့်တိုင် ဖိုးတီတာတို့၏ ဧည့်သည်တွေ ရောက်မလာကြသေးပါ။
သူ… အပင်ပမ်းခံထားတာလေးတွေ အလဟသဖြစ်သွားမှာကို အနည်းငယ်မက ပူပန်စွာ မေမေက ဖြစ်စေချင်သည့်အတိုင်း ဇွတ်ပြောနေပါသည်။ ဒါပေမယ့် နောက်ထပ်အချိန်တွေ လင့်လာသည့်တိုင် ဧည့်သည်များ၏ အရိပ်အယောင်မျှ မမြင်ရသေး။
မေမေ သတိတရ ပြောလေမှ ဖုန်းလှမ်းဆက်မိလျှင် ဆက်သွယ်မှုဧရိယာ ပြင်ပသို့ ရောက်ရှိနေပါသည် တဲ့။ အကြိမ်ကြိမ် စိတ်ရှည် လက်ရှည် ဆက်တိုက်ခေါ်လေမှ မြို့အလွန် ငါးမိုင်မှာ ရောက်နေခဲ့တာ သိရတော့သည်။
“မိမော်… နင်တို့ ပြန်လာမီမှာလား။ ငါတို့ ညနေကတည်းက စောင့်နေတာနော်”
မေမေ့စကားသံ မဆုံးမီ ဖုန်းလိုင်းပြတ်သွားခဲ့ပြီ။
ဦးမောင်တို့၏ အမွေဆိုင်ခြံကြီးက ဖိုးတီတာတို့မြို့၏ အလွန် ငါးမိုင်ခန့်အကွာမှာ ရှိတာဖြစ်သည်။ ထိုခြံကြီးကို ရောင်းချကာ ခွဲဝေယူကြတော့ဖို့ ညီအစ်ကို၊ မောင်နှတွေ စိတ်ဝမ်းလက်ညီရှိခဲ့ကြပြီမို့ ထိုနေ့က သက်ဆိုင်သူအားလုံး မျက်နှာစုံညီ တွေ့ဆုံကြတာ ဖြစ်ပါသည်။
``ဖုန်းလိုင်းတွေက မမိတဲ့နေရာ များနေတယ်ကွယ်။ ခု.. ရ ရချင်း ပြန်ဆက်တာ။ ကိုမောင့် ဆွေမျိုးတွေက ၀ိုင်းဆွဲထားကြတော့ ချက်ချင်း ပြန်လာဖို့က မကောင်းဘူးလေ။ အဲဒါ အပြန် နည်းနည်း နောက်ကျမယ်။ မော်တို့ ရောက်အောင်လာပါ့မယ့်။ ခု.. ပြန်လာဖို့ လုပ်နေပြီ။ ဒါပေမယ့် နောက်ကျမှာမို့ ထမင်းစား စောင့်မနေပါနဲ့တော့။ အရင်စားထားနှင့်လိုက်ပါလို့..´´
``အဲဒီ မိမော်တို့ဟာ သေချာမှာထားရဲ့နဲ့။´´
``သူတို့လည်း ကိစ္စ၀ိစ္စတွေ မပြီးပြတ်နိုင်လို့ ရှိမှာပေါ့ ဝေရာ။ ပြီးတော့ ဆွေရေးမျိုးရေးကလည်း ရှိသေးတာဆိုတော့ လိုတာရပြီး ချက်ချင်းပြန်ချလာလို့ ရမလား´´
အန်တီမော်က ငယ်ငယ်ကတည်းက ပြည့်စုံကြွယ်ဝသော အသိုင်းအ၀ိုင်းက ဖြစ်သည်။ သည်စဉ်ကတည်းက မချို့တဲ့လှသည်တိုင်၊ မပြည့်စုံရှာသောမေမေ့ အနွံတာကိုခံနိုင်သော မေမေ့အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်း ဖြစ်လေသည်။ မေမေက စာမေးပွဲနီးပြီဆိုလျှင် အန်တီမော်တို့အိမ်မှာပဲ နေ့နေ့ညည သွားနေခဲ့ဖူးတာဖြစ်သည်။ အန်တီမော်တို့ တစ်မိသားစုလုံးက မေမေ့ကို မိသားစုဝင်တစ်ယောက်လိုပင် အန်တီမော်နှင့် တန်းတူထားကာ ချစ်ခင်တွယ်တာခဲ့ကြသည်။ လိုအပ်သမျှ ကူညီဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့ကြပါ၏။ အသီးသီး အိမ်ထောင်ကျပြီးကတည်းက တစ်နေရာစီ အနေဝေးသွားခဲ့ကြတာ။ တစ်နှစ်နေလို့တောင် တစ်ကြိမ်ပြန်တွေ့ရန် မလွယ်ကူကြတော့တာမို့ မေမေက ခုလောက် အရေးသယ်၊ အကဲပိုနေတာဖြစ်ပါသည်။ ဖိုးတီတာတို့ မောင်နှမတွေတစ်သက် မြင်ဖူးရုံသာရှိကာ တစ်ကြိမ်တစ်ခါမျှ အရသာ မမြည်းစမ်းဖူးသော ဒေသထွက် ပုဇွန်ထုပ်ကြီးတွေကို စွန့်စွန့်စားစား ၀ယ်ချက်ထားတာသာ ကြည့်တော့။
“မိမော် အကြောင်း ဝေ… ကောင်းကောင်း သိတယ်။ ဝေပြောရင် သူ.. မနေဘူး”
“ငယ်သူငယ်ချင်း အချင်းချင်း ရှားတောင့်ရှားပါး ပြန်တွေ့ရချိန်လေးမှာ တခြား မြော်မြင်မှုတွေ ဆွဲထည့် မပစ်ပါနဲ့ကွာ”
မေမေသည့် ဖေဖေ့စကားကြောင့် ဒေါသမွှန်ကာ မျက်ရည်ပင် လည်လာလျှင် အံ့သြရသေးသည်။
“ရှင်ပြောပုံက မိဝေကပဲ ငယ်သူငယ်ချင်း သံယောဇဉ်ကို ခုတုံးလုပ်၊ ထမင်းတစ်နပ်ရင်းပြီး ယောက်ျားရထူးတိုး ပါမယ့်အရေး မရိုးမသား ကြိုးပမ်းနေသလိုပေါ့လေ”
“ဆောရီး… ဆောရီး ဝေရယ်။ ကိုယ်စကားပြော လောသွားလို့ပါ”
ဖေဖေ… ပြာပြာသလဲ တောင်းပန်နေသည့်တိုင် မေမေ့ စိတ်အနာမှာ ကျိတ်ခဲမပြေနိုင်။
“ဝေတို့လည်း ညီအစ်မအရင်းလို ပေါင်းလာတဲ့ ငယ်သူငယ်ချင်း အရင်းကြီးတွေပါ ကိုရဲ့။ အပူပင်မဲ့ သွားလာနေခဲ့ရတဲ့ ငယ်ဘ၀တွေ အကြောင်း အေးအေးဆေးဆေး စကားလက်ဆုံပြောချင်၊ ကြည်နူးချင်လို့ကို ခုလို… မရှိ၊ ရှိတာ ရှာကြံစီမံထားတာပါ။ ဒါပေမယ့် ကို့ ရာထူးတိုးကိစ္စက တိုင်းရုံးအထိ ကို… လိုက်သွားခဲ့တာ ဘယ်လောက်ကြာနေပြီလဲ။ ခုထိ ဘာမှ လည်း အကြောင်းမထူးသေးဘူး။ တစ်ခုခု အကြောင်း မညီညွတ်တာလား။ ဒါမှ မဟုတ် အန်ကယ်လ် ကိုယ်တိုင်က ကို့ကို ခေါက်ထားတာလား ခုထိ မသေချာဘူးလေ”
“တစ်ခုခု အကြောင်း မညီညွတ်လို့ ဖြစ်မှာပေါ့ကွာ”
“ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ်လေ..။ အခု မိမော် နဲ့ ကြုံတောင့်ကြုံခဲ တွေ့တုန်းလေး အဲဒီစကား ပြောလိုက်မယ်လေ။ ဖုန်းထဲကပြောရင် ခုလောက် ပြည့်စုံဖွယ်ရာအောင် မပြောနိုင်ဘူး ရှင့်။ ပြီးတော့ ဝေတို့အကြောင်းဆိုရင် မိမော်က သူ့အဖေကို ပြန်မပြောပဲ၊ အပူကပ် မပေးပဲ နေမှာ မဟုတ်ဘူး။ သေချာတယ်။ အန်ကယ်လ်ကလည်း ငယ်ငယ်ကတည်းက သူ့သမီး ပြောရင် တစ်ခွန်းပဲ”
အန်တီမော်တို့မှ ဒီညစာ လာမစားလျှင် မေမေစေတနာနှင့် အပင်ပမ်းခံထားမှု အားလုံး သဲထဲရေသွန်သလို အဟောသိကံဖြစ်ရတော့မည်။ အန်တီမော့်ကို တစ်သက်လုံး အနာဟောင်းဖော်ကာ စကားနာထိုးလို့ ဆုံးမှာလည်း မဟုတ်တော့။
``စောင့်မနေတော့ဘူးကွာ။ ရောက်ချင်တဲ့အချိန် ရောက်လာကြပါစေတော့။ တို့ သားအမိ၊ သားအဖတွေ စားထားနှင့်ရအောင်´´
ဖေဖေ့အစီအစဉ်ကို ဖိုးတီတာတို့ မောင်နှမကလည်း သဘောတူစွာ တစ်ယောက်မျက်နှာ တစ်ယောက်ကြည့်ကာ မြူးပျော်တက်ကြွ သွားကြရပါသည်။ သို့သော်….
ပုဇွန်ထုပ်ဟင်း တစ်မျိုးတည်းမကပါ။ ငါးသလောက်နှပ်နှင့် ဖေဖေ့အကြိုက် ငြုပ်သီးစပ်စပ် ပုဇွန်ချဉ်သုပ်ပန်းကန်လည်း စားပွဲပေါ်မှာ မရှိတော့။ မေမေသိမ်းလိုက်ပြီ။ ဖိုးတီတာတစ်ယောက် စူပုတ်ရှုံ့မဲ့နေတော့ကာ….
``ဟဲ့…. အဲဒါ ဧည့်သည်တွေ အတွက် ချန်ထားတာဆို´´
``မေမေ့ဧည့်သည်တွေက လာမှာဖြင့် ဟုတ်ပဲနဲ့´´
မေမေက သေချာပိုင်နိုင်စွာ ဆိုနေဆဲ။ ဖေဖေက မနေနိုင်စွာ….
``ကလေး စိတ်ကျေနပ်သွားအောင် နည်နည်းတော့ ကျွေးလိုက်စမ်းပါ မိန်းမရာ´´
``အော်…ကျွေးချင်ပြီလားရှင်ရယ်။ ကျွန်မလည်း မွေးထားတဲ့ အမေပဲ ဥစ္စာ။ ပုဇွန်ထုပ်ဈေးက ရွှေနဲ့စက်ဝယ်ရမတတ် ခေါင်ခိုက်နေတာ ရှင်လည်း သိတာပဲ။ ဧည့်သည်တွေ ကျွေးပြီးကျန်ရင် ကျွန်မ မစားပါဘူ။ ရှင့်သားနဲ့ သမီးကိုပဲကျွေးမှာ စိတ်ချ။ ဖိုးတီတာ…သား အဲလိုရစ်တာ မေမေမကြိုက်ဘူးနော်´´
``အဲဒါဆို ဧည့်သည်တွေ ကျွေးပြီးမှ သားစားတော့မယ်´´
``ဟဲ့…ဧည့်သည်တွေက ဘယ်အချိန်မှ ရောက်မယ်မှန်းမှ မသိတာ။ တော်ကြာအဆာလွန်ပြီး ဗိုက်တွေဘာတွေ အောင့်နေမှာပေါ့ ။ လာ…ခုနည်းနည်းလောက် အဆာခံအောင် စားထားနှင့်´´
``ကိုနော်။ ရှင်ကပါ ဘယ်လိုဖြစ်နေတာလဲ။ ´´
``နည်းနည်းလောက် စိတ်ကျေနပ်ရုံ ထည့်ကျွေးလိုက်တော့ ဘာဖြစ်သွားမှာမို့လဲ´´
``အော်…ဟင်းပွဲမလှတော့မှာ စိုးလို့ပေါ့။ ပုဇွန်ထုပ်က တစ်ပန်းကန်လှလှရဖို့တောင် မနည်း…။ ဟဲ့….. ဖိုးတီတာ ဘယ်ကိုလဲ´`
ဖိုးတီတာတစ်ယောက် ထမင်းဝိုင်းကို ကျောခိုင်းကာ အ်ိပ်ယာဆီ လှမ်းဝင်ခဲ့လိုက်တော့သည်။
အန်တီမော်ကတော့ မေမေ့ကို ချော့မော့ တောင်းပန်လို့ မဆုံးနိုင်တော့။ အန်တီမော့်အား ရန်လုပ်နေသော မေမေကတော့ အသံတွေတုန်ကာ မျက်ရည်ပင်ဝဲနေသည်။
``သူတို့အားလုံးကလည်း တစ်ခါတစ်လေ ရောက်တုန်းရောက်ခိုက်ကလေး နေပါဦး။ ထမင်းစားသွားပါဦး တဖွဖွ ၀ိုင်းပြောနေကြတာ။ ကိုမောင့်ဘက်က ဆွေမျိုးဆိုတော့ ငါလည်း ဇွတ်ပြန်လာဖို့ ခက်တယ် ဝေရဲ့။ ခုက အမွေလာခွဲယူတာ ဆိုတော့ ရပြီး ပြန်တာပဲလို့ သူတို့ အထင်လွဲမှာလည်း စိုးရသေးတယ်။ ငါ တောင်းပန်ပါတယ် သူငယ်ချင်းရယ်..´´
အန်တီမော်သည် မေမေစိတ်မကောင်းမှာ၊ စကားနာထိုးကာ ရန်လုပ်မှာတော့ အလွန်ပူပန်စိုးရွံ့နေပုံပင်။ ခရီးရောက်မဆိုက်ပင် မေမေ့ထံ တန်းလာခဲ့တာဖြစ်သည်။
``မြိုင်တို့တော့ ပင်ပမ်းပြီး တည်းမယ့်အိမ် တန်းဝင် ကျန်ရစ်ခဲ့ပြီ။ ကိုမောင့်ကိုတောင် ဝေ… စိတ်ဆိုးနေလိမ့်မယ်။ ရှင်….မျက်နှာတော့လိုက်ပြဦး ဆိုပြီး ဇွတ်ဆွဲခေါ်လာတာ´´
``မိဝေ။ နောက်တစ်ခေါက်လာတော့မှ ကျွေးပါဟာ…နော်´´
``နင်ကလည်းဟာ။ အော်…ဟဲ့.. ငါမေ့နေတာ။ ဒီမလာခင်လေး ဖေဖေနဲ့ ဖုန်းပြောဖြစ်တော့ ဒီတစ်ခေါက် နင့် ချစ်ချစ်ကြီး အခြေအနေကောင်းတယ် ဆိုပါလား။ အဲကျ… အရာရှိကတော်ဖြစ်မှ နင်… ငါ့ကို မကျွေးပဲ နေလို့ မရပါဘူး မိဝေရာ…ဟား ဟား”
ခုလောက်ရှိလျှင် ဖေဖေရော၊ မေမေပါ အပြုံးချင်း ပြိုင်နေကြမှာ ဖိုးတီတာ မမြင်ရပေမယ့် သိနေပါသည်။
“အယ် …. ဖိုးတီတာ တစ်ယောက်ရော မမြင်ပါလား´´
`အိပ်နေပြီ´ ဆိုသော မေမေ့အဖြေက ခပ်ဆဆ။ အန်တီမော်တို့ ဦးမောင်တို့ ပြန်သွားကြသည့်တိုင် အိပ်ယာထဲမှာ လူးရင်းလွန့်ရင်း စိတ်ကောက်နေသော ဖိုးတီတာကို သူ့မမကလည်း ချော့နေရပါသည်။ ဖေဖေကလည်း…
ဖိုးတီတာက ခုမှ လေးတန်းကျောင်းသားပဲ ရှိသေးတာ။ ကလေးပဲဆိုတော့ နည်းနည်းတော့ စိတ်ကောက်လို့မရဘူးလား။ နောက်နှစ် အလယ်တန်းတက်ရင်တော့ ဖိုးတီတာ စိတ်မကောက်တော့ဟု စိတ်ဆုံးဖြတ်လိုက်မိပြီ။ ထိုစဉ် မေမေ အခန်းထဲဝင်လာကာ…
``ကဲ…တို့မိသားစုတွေ ညလည်စာတစ်ထပ် စားလိုက်ကြဦးစို့။ လာ…မေ့သားလေးလည်း ထ…´´
မေမေကိုယ်တိုင် ပွေ့ပိုက်ထူမ လာတော့လေမှ ဖိုးတီတာတစ်ယောက် မူလကျီမျက်နှာကြော နည်းနည်းလျော့လာရတော့ပြီ။
``မေမေ့သားက အစားပုတ်၊ အကောင်းကြိုက်လေးပဲ´´
ခေါင်းပင် မဖော်အားတော့သော ဖိုးတီတာအား မေမေနှင့်ဖေဖေက တပြုံးပြုံးငေးလျှက် ကျေနပ်ကြည်နူး နေကြပါသည်။ ဖိုးတီတာကတော့ ဆီတွေရွှဲနစ်ဝင်းဝါနေသော ပုဇွန်ထုပ်ကွေးကွေးကြီးကို သွားဖုံးမြုတ်မတတ် ကိုက်ဝါးကာ ပလုပ်ပလောင်း အရသာခံနေရင်း အန်တီမော်တို့ကို ခဏခဏ ထမင်းဖိတ်ကျွေးရလျှင် ကောင်းမည်ဟု တွေးနေမိဆဲ ဖြစ်ပါသည်။ ။
Posted by သတိုး at 9:58 AM4comments: